Maxaa birta birta lagu cadeeyay
Ahama Tile Tile steel
Nidaamka sawirka siliggu wuxuu waayi doonaa dhumucda saxanka birta ahama ilaa xad, guud ahaan 0.1 ~ 0.2mm. Intaas waxaa sii dheer, maadaama jirka bini'aadamka, gaar ahaan calaacasha, uu leeyahay sir xoog leh oo saliid iyo dhidid ah, sabuuradda birta ah ee siligga lagu xardho ayaa inta badan ka tagi doonta faro cad markii gacanta lagu taabto, waxayna u baahan tahay in si joogto ah loo xoqdo.
Ahama sawirka silig ahama guud ahaan wuxuu leeyahay dhowr saameyn: qaabka silig toosan, qaabka barafka, qaabka naylon. Qaabka toosan ee xariggu waa qaab aan kala go 'lahayn oo kor ilaa hoos ah, guud ahaanna waa ku filan tahay in la isticmaalo mashiin sawir oo go'an si loo wareejiyo qaybta shaqada horay iyo gadaal. Qaabka barafka ayaa ah midka ugu caansan hadda. Waxay ka kooban tahay wax yar oo dhibco hagaagsan ah, waxaana loo isticmaali karaa warqadda ciida ee cayayaanka si loo gaaro saameynta.
Qaabka naylonku wuxuu ka kooban yahay xarriiqyo dherer kala duwan leh. Sababtoo ah giraanta nayloonku waa mid jilicsan oo jilicsan, waxay burburin kartaa qaybo aan sinnayn si loo gaaro qaabka naylonka
Gudiga sawirka siligga guud ahaan waxaa loola jeedaa dusha sare oo lagu daray magaca wadajirka ah. Magaca hore waa guddi barafoobay, iyo dusha sare ee dusha sare waxaa ka mid ah xariiqyo toosan, xariiqyo aan kala sooc lahayn (iyo khadad), jajab iyo xargo. Midabaynta guddiga silig ahama midabkeedu waa dusha sare ee midabada kala duwan ee laga helo dahaadhka biyaha kiimikada ama faleebada faleebada faleebada faleebada ah ee dusha sare ee dusha sare ee birta birta ah ee saboolka birta ah.
1. Banaynta dhammaan qaybaha waa inay ahaato mid sax ah, oo leexinta la oggol yahay ee dhererka qaybaha waa 1mm.
2. Qaybaha waa in laga hubiyaa toosnaanta ka hor inta aan la goyn, haddii kale waa in la toosiyaa.
3. Inta lagu jiro alxanka, korantada ama siliggu waa inuu noqdaa nooca ku habboon alaabada la marinayo, shahadda warshaddana waa in la bixiyaa.
4. Qaybta waa in lagu dhejiyaa meel sax ah inta lagu jiro alxanka.
5. Inta lagu jiro alxanka, kala-goysyada alxan ee ka dhexeeya qaybaha waa inay ahaadaan kuwo adag, alxamdadu waa inay buuxsamaan, iyo mowjadda alxanka ee dusha sare ee alxamdu waa inay ahaataa mid isku mid ah, oo waa inaysan jirin wax ka hoos-baxa, welwel aan dhammaystirnayn, dildilaacyo, xoqid, alxamid kuuskuus, gubasho, xoqan qaanso, Cilado sida godadka arc iyo daloolada irbad u eg, waana inaysan jirin wax firidhsan oo ku yaal aagga alxanka.
6. Ka dib marka alxammadu dhammaato, siligga alxanka waa in la tuuraa.
7. Ka dib marka walxaha la alxameeyo oo la isu geeyo, waa in lagu sifeeyaa laguna sifeeyaa mashiinka gacanta lagu hayo si muuqaalku u noqdo mid siman oo nadiif ah.
Waqtiga boostada: Meey-14-2021